Fifidianana ihany aloha… | NewsMada
Fifidianana ihany aloha…
Par Taratra sur 28/05/2018
Efa nampoizina? Ny fanapahan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny amin’ny fitorian’ny depiote 73 ho an’ny fanovana, ny fampiatoana ny filohan’ny Repoblika noho ny tsy nananganany ny Fitsarana avo (HCJ) io. Mpitsara araka ny lalàmpanorenana ny HCC sa mpanelanelana na mpamaha ny olana politika amina zavatra sampontsampona toy ny fifanarahana fandraisana andraikitra, 12 jona 2015?
Mitohy ny tsy fanarahan-dalàna. Aiza ho aiza amin’ny lalàmpanorenana, ohatra, ny hoe fananganana governemanta iraisana? Fanapahan-kevitra politika ny an’ny HCC, fa tsy fampiharana ny lalàmpanorenana. Nefa izy no miantoka ny fitandroana izany. Inona no ho vokany? Izy aza tsy manaja ny lalàmpanorenana, ahoana ny hampanajana sy hampiharan’ny hafa ny didy avoakany? Mahabe adihevitra.
Na izany aza, ho hita eo ny ho tohin’izao toe-draharaha: fanapahan-kevitra politika no navoakan’ny HCC. Tsy maintsy ho fijery politika koa no andraisan’ny tsirairay azy, indrindra ireo voakasika mivantana. Politika io, ady fiady. Mety hisy ve, ohatra, ny fifanarahana politika ao anatin’ny folo andro? Mbola mety hitsimbadika ny toe-draharaha: tsy araka ny lalàna intsony, fa efa politika tanteraka.
Ho voavaha ve ny olana? Arakaraka ny fifandanjan-kery sy ny tombontsoa arovana na iadiana io. Fifidianana ihany aloha izany no atrehina izao? Fifidianana mialoha ny fotoana… Hampilamina sy hampitony ve izay? Na hiombonana sy mampiombona amin’ny fifidianana hoe eken’ny rehetra, madio, mangarahara, azo antoka. Ho hita eo, fa tomponandraikitra amin’ny fanapahan-keviny sy ny ataony ny tsirairay.
Mbola resaka sy raharaha hafa indray izany ny ankoatra ny fifidianana? Ny amin’ny tokony hanenjehana araka ny lalàna ireo mpanao koikoly, ohatra, ny tsimatimanota amin’ny fandikan-dalàna, ny fivarotan-tanindrazana… Eny, na ny amin’ny hoe fampihavanam-pirenena aza, ny fanovana sy ny fanorenana ifotony… Mila mazava izany rehetra izany. Sao izay heverina ho vahaolana izao no olana atsy ho atsy?